Afhayeenkii hore ee maamulka Galmudug oo Wali ku xiran Xabsi kuyaala Muqdisho iyadoo lagu sameeyay…. | allsaaxo online
Afhayeenkii hore ee maamulka Galmudug oo Wali ku xiran Xabsi kuyaala Muqdisho iyadoo lagu sameeyay….
Dowlada Soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay Afhayeenkii hore ee maamulka Galmudug Cabdulaahi Xaashi Faarax oo dhawaan shaaciyay in ciidamo katirsan Nabad sugida jirdil iyo tacadiyo kale u geesteen.
Muuqaal laga duubay Afhayeenkii hore ee maamulka Galmudug ayuu ku sheegay in ciidanka Nabad sugida jir dil kadib ka qaadeen sawiro isaga oo qaawan uguna hanjabeen in ay baahin doonaan hadii uu Madaxda dowlada wax ka sheego.
Hadalkan uu sheegay Afhayeenka ayaa la sheegay in uu ka careesiiyay Saraakiisha laamaha amaanka dowlada Soomaaliya, waxaana afar maalin kahor looga yeeray xarunta Hay’ada Dambi baarista CID halkaas oo weydiimo kadib lagu xiray.
Sida aan Wararka ku heleyno Afhayeenkii hore ee maamulka Galmudug ayaa laga wareejiyay xarunta CID-da waxaana hada ku xiran yahay Xabsiga dhaxe ee Xamar, mana jiro ilaa hada wax Maxkamad ah oo lasoo taagay Cabdulaahi Xaashi.
Muuqaalo laga duubay Afhayeenkii hore ee maamulka Galmudug ayaa dood badan ka dhaliyay baraha bulshada, waxa ayna dadka qaar sheegeen in warka Afhayeenka uu yahay been abuur halka kuwa kalana sheegeen in macquul tahay jiritaanka waxa uu sheegay.